विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीको हकहित र दिर्घकालीन शैक्षिक सुधारका निम्ति हुनुपर्छ ।
भलाकुसारी | Published on 2017-08-27 |
नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी (अखिल क्रान्तिकारी) को राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा चलिरहेको छ ।
सम्मेलनमा संगठनको नेतृत्वको लागि आधा दर्जन आकांक्षी छन् । अखिल क्रान्तिकारीको जारी सम्मेलनले ३३ जना पदाधिकारीसहित २४७ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । 'एकताको सम्मेलन' नाउँ दिइएको यस सम्मेलनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका उमेदवारहरुका आआफ्नै एजेन्डा र दाबी रहेका छन् ।
यसैक्रममा हामीले अखिल क्रान्तिकारीको चुनावी दौडमा रहेका राजेश दुलालसँग कुरा गरेका छौं । दुलाल एक दशकदेखि अखिल क्रान्तिकारीमा सक्रिय छन् ।
तपाईं कुन पदको उमेदवार ?
म अखिल क्रान्तिकारीको खुला केन्द्रीय सदस्यको उमेदवार हुँ ।
एकताको २१औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा खुला केन्द्रीय सदस्यमा मेरो दाबी रहेको छ । मैले मुख्यत: ३ वटा विषयमा फोकस गरेको छु । एक- द्वैध शिक्षाप्रणाली विरुद्ध आवाज उठाउन, दुई- निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न, तीन- आत्मनिर्भर शिक्षाको लागि ।
यिनै तीनवटा बुँदामा केन्द्रित रहेर विद्यार्थी आन्दोलनमा समर्पित हुनका लागि मैले केन्द्रीय सदस्यको दाबी गरेको हुँ । अहिले द्वैध शिक्षाप्रणालीका कारण विद्यार्थीले समान रुपमा शिक्षा पाइरहेका छैनन् । समाजको उच्चवर्ग र निम्नवर्गका विद्यार्थी अलग अलग प्रकारको शिक्षा लिन बाध्य छन् । धनीले राम्रो स्कुल पढ्न पाउने, गरीबले कम गुणस्तर भएका विद्यालयमा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा सबैका लागि समान हुनुपर्छ । म त्यसका लागि काम गर्नेछु ।
दोस्रो कुरा, नेपालको संविधानमा नि:शुल्क शिक्षाको प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधान विपरीत शिक्षा दिन-प्रतिदिन महङ्गो हुँदै गइरहेको छ । संविधानप्रदत्त नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ ।
अहिलेको शिक्षाप्रणालीले बेरोजगार उत्पादन गर्न भूमिका खेलिरहेको छ । रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने शैक्षिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि विद्यार्थी संगठनले राज्यलाई दवाब दिनुपर्छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर विद्यार्थी आन्दोलन अघि बढाउन मेरो भूमिका रहनेछ ।
प्रायजसो उमेदवारहरुका एजेन्डा उस्तै लाग्छन् । चुनावका बेला सबैले चर्कोरुपमा उठाउने मुद्दा निर्वाचित भएपछि भने सेलाउँदै जान्छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेतृत्व दाबी गर्नु, मुद्दा उठाउनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन । तर, आफु निर्वाचित भएपछि प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्नु गलत हो । कुनैपनि मुद्दालाई स्थापित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि त्यसबाट भाग्नु सर्वथा गलत हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रतिनिधि साथीहरु जसले मत दिनुहुन्छ उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । विचार गर्नुपर्छ । को ठीक, को बेठीक । कुन मुद्दा ठीक, कुन व्यक्ति ठीक भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर मत दिनुपर्छ । असल नेतृत्व चयन गर्नसके निर्वाचनअघि र पछि गर्ने काम तथा प्रस्तुतिमा फरक हुँदैन ।
निर्वाचित भइसकेपछि पनि प्रतिबद्धता अनुरुप काम भयो कि भएन ? नेतृत्व कता जाँदैछ ? विचलित भएको पो छकि भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
निर्वाचनअघि र पछि कार्यशैली फरक हुनु, प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु बेठीक हो भन्नुभयो । तपाईंका प्राथमिकता केके हुन् ?
मसँग चुनाव जितेपछि गर्नुपर्ने कामको सूची छ । ठोस योजनाहरु छन् । शैक्षिक माफियाहरुको अन्त्यका लागि काम गर्नु, निजी विद्यालयमा देखिएको बेथितिका विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नु र सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन पहल गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्ने, शिक्षालाई सबैको पहुँचमा ल्याउने तथा आधुनिक, वैज्ञानिक र रोजगारमुखी बनाउने कार्यमा म समर्पित भएर लाग्नेछु ।
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन आफैमा दोषमुक्त छैन । विद्यार्थी संगठनको भूमिकाबारे अनेक टिप्पणी र आलोचना हुने गरेको छ । अबको विद्यार्थी आन्दोलन कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ । राजनीतिक भागबन्डा बेथितिको मुख्य कारक हो । त्यसलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुका शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गराउन, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन र समायोजन गर्न, परीक्षा प्रणालीलाई समयानुकुल लैजान विद्यार्थी संगठनहरुले अहम् भूमिका खेल्न सक्छन् । र, खेल्नुपर्छ ।
अबको विद्यार्थी आन्दोलन केवल टायर बाल्ने, तालाबन्दी गर्ने र पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङको रुपमा मात्रै रहनुहुँदैन । विद्यार्थी राजनीति रचनात्मक हुनुपर्छ । टायर बाल्ने, विध्वंस गर्ने काम विद्यार्थीको होइन । विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीको हकहित र दिर्घकालीन शैक्षिक सुधारका निम्ति हुनुपर्छ ।